Muhiim 2019: Waxa aanaan arag maanta | Wararka IPhone
Waa hagaag, Muhiim 2019 ayaa hadda dhammaatay, halkaasoo xiddig weyn uu ahaa iPhone 11 cusub, laakiin halkaas warar badan oo xan ah oo maalmihii la soo dhaafay laga hadlay oo aan dib loo eegin soo bandhigida maanta. Waxaan sii wadaynaa inaan taxno.
Waxay u muuqatay in nuxurka maanta uu ahaa mid qaas ah. Xaqiiqda ah in laga sii daayay a rasmi ah youtube, Waxay soo jeedisay in Apple ay rabto inay muujiso dadweynaha guud, kaliya maahan taageerayaasheeda, wax qaas ah. Sidaas may ahayn Waxay ahayd hal bandhig oo dheeri ah, oo ina baraya a ipad-ka cusub ee 10,2-inji ah, madadaalada ciyaaraha ee Apple Arcade, barnaamijka Apple TV + ee fiidiyowga ah, waxaa iska cad iphone-ka cusub iyo taxanaha cusub ee Apple Watch 5. Ma jiraan wax intaa ka badan ...
Wax kale maahan. Mana dhahayo wax intaa ka badan maxaa yeelay maalmahan waxaa aad loo hadal hayaa aalado kala duwan oo aan la arki doonin xilligan. Waxaan ula jeedaa Apple TAG keychain, tartan ka fiicnaaday Tile tracker keychain, ilaa muraayadaha dhabta dhabta ah, illaa nooc cusub oo Apple TV ah, diyaarna u ah ciyaaraha iyo qalin yar oo Apple ah oo loo adeegsado iPhone 11 cusub.
Sidoo kale uma muuqato in iPhones cusubi leeyihiin dib u soo celinta amarka wireless, inaad awood u yeelatid inaad ku soo dallacdo Apple Watch ama airpod-yada gadaasha taleefanka. Wax badan baa jira oo laga hadlay hadal haynta ku saabsan astaamaha cusub ee Apple astaanta u ah dhabarka, iyadoo loo maleynayo inay ahayd in xarunta la galiyo si wanaagsan loogu soo oogo, waxaana soo baxday in maya, waxba haba yaraatee.
Haddii taxanaha cusub ee Apple Watch 5 la muujiyay, iyadoo ay jiraan labada qalab kiiska cusub ee horay loo sii daayay, titanium iyo dhoobada, laakiin midkoodna app kormeerka hurdada cusub, kaas oo kooxda Apple u gaarka ah ay maalmo ka hor iftiimisay. Waa inaan la dhammayn.
Sidoo kale ma jiraan wax dib u eegis ah oo ku saabsan iOS 13 cusub. Waa run inay horey ugu muujiyeen muhiimada hore, laakiin maadaama aan wali la sii deynin, wax badan kuma qaadan in la qoro hagaajinta ay markale bixiso.
Oh, iyo mid kale oo dheeri ah ... waxaan rabnay inaan maqalno ... Hal wax dheeri ah...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Muhiim 2019: Wixii aan arag maanta
Taxanaha Apple Watch 5. Waxyaabaha Cusub, Qiimaha, iyo Taariikhda La Soo Saarayo
iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, shirkadda cusub ee Apple